Ity ny fomba fiasan'ny fihainoana ny HomePod | Avy amin'ny mac aho
Androany aho dia niresaka taminao momba ny fomba nampidiran'ny Apple ny singa rehetra ao amin'ny vatan'ny HomePod. Naneho hevitra aho fa ilay nomanin'ny solosaina natao amin'ny fampisehoana izany eo amin'ny fiaraha-monina, dia tena decaffeine ary mankamin'ny famoronana endrika anatiny ny HomePod izay tena tsy toy izany, na hoe niova tamin'ny lafiny sasany izy io.
Ity mpandahateny vaovao avy any Apple ity dia manana microphone enina aparitaka manodidina ny vatan'ny varingarina izay mamorona ny vatan'ny mpandahateny ary miraikitra amin'ny rindrina anatiny ihany izy ireo, afaka mihaino amin'ny lavaka kely izay raha izany afaka nandinika tamin'ny fanapahana nataon'ireo tovolahy tao amin'ny iFixit izahay.
Ny mikrônon'ity vokatra Apple vaovao ity no tadiavinay horesahina ato amin'ity lahatsoratra ity ary ny Apple dia tsy nahavita asa tsara tamin'ny famolavolana ny andiana mikrôfôna ireo. ny HomePod Izy io dia mpandahateny fanamafisam-peo izay afaka maheno antsika na dia tonga amintsika aza ny mibitsibitsika aminy metatra vitsivitsy miala eo na ndao hiresaka amin'ny mpandahateny raha 100% ny mozika lalaovinao.
Ireo mikrôfôna ireo dia manadihady ny onjam-peo avy amin'ny lalana samihafa ary manoratra azy io mba hanomezana vahaolana tsara indrindra amin'ny zavatra henonao. Na izany aza, maro ny fisalasalana mipoitra momba ny fampiasana Siri amin'ny "Hey Siri" raha toa ka misy fitaovana maromaro mora tohina "Hey Siri" ao amin'ilay efitrano iray.
Azoko lazaina fa teo amin'ny toe-javatra nisy ahy tao anaty fiara aho, niaraka tamin'ny iPhone nifandray tamin'ny alàlan'ny bluetooth tamin'ny stereo ny fiara ary niaraka tamin'ny Apple Watch teny an-tànako. Efa noteneniko ireo masinina "Hey Siri" ary matetika dia namaly ahy ny Apple Watch fa tsy ny iPhone tamin'ny alàlan'ny mpandahateny fiara. Izany dia satria ny Apple Watch dia maheno tsara kokoa noho ny mikrônan'ny fiara manokana ary noho izany, nanapa-kevitra ny rafitra fa tsara kokoa ny mamaly amin'ny alàlan'ny fitaovana izay naheno ny tsara indrindra..
Eny, izany zavatra izany ihany no mitranga amin'ny fanontaniana napetrako taminao taloha fa amin'ny nuansa. Ireo injenieran'ny rindrambaiko Apple dia nihevitra fa amin'ny ankamaroan'ny fotoana hananantsika ny HomePod sy ny iPhone na ny Apple Watch ao amin'ny efitrano iray ihany ka raha miteny isika hoe "Hey Siri" ho very saina raha mamaly daholo ny fitaovana rehetra. Raha ny an'ny mpandahateny Apple dia voarindra avokoa ny zava-drehetra ka ny HomePod no mamaly anao fa tsy ny iPhone, iPad na Apple Watch. Hovaliana ihany amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo fitaovana ireo raha toa ka tsy maheno tsara ny filaminana ny HomePod, izay miahiahy ahy amin'ny fampiharana microphones tonga lafatra nampidirin'i Apple tao.
Raha tadiavintsika fa tsy hisy mihitsy ny mety hamalian'ny iPhone na ny iPad dia ho ampy ny hametrahantsika azy ireo amin'ny efijery etsy ambony, aorian'izay, ny haingam-pandeha mitovy amin'izany dia hanazava fa tsy mila fanelingelenana ny rafitra. miaraka amin'i Siri ao aminy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Izany no fiasan'ny fihainoana ny HomePod